Mahazoa aingam-panahy fa aza manaraka ny modely | Martech Zone
Alahady 6 aprily 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Amin'ity herinandro ity aho dia mamaky ny Starbucked, nosoratan'i Taylor Clark, ho fanomanana ny Indianapolis Business Book Club. Nanokatra ny boky miresaka momba ny Starbucks tany am-piandohana i Taylor Clark ary ahoana ny fisokafan'ny masony izany rehefa nanokatra Starbucks vaovao teo ampitan'ny arabe i Starbucks - ary ny fivarotana roa no fivarotana be vokatra indrindra ao amin'ny rojo.
Nanentana ahy hanoratra ity lahatsoratra ity satria mieritreritra aho fa misy 'fanao tsara indrindra' fa tsy misy rijan-kevitra momba ny marketing mahomby. Hanoratra bebe kokoa momba an'ity aho Taom-pifanakalozan-kevitra 2, saingy tena manelingelina ahy ny kabary 'ahoana no hahombiazana' izay hitanao manerana ny tranonkala. Miezaka ny tsy hanohana na hanonona bilaogera sy bilaogy manandrana mandrahoana ny zava-drehetra amin'ny fomba iray aho. Tsy misy raikipohy.
Izay misy amin'ny Internet dia misy aingam-panahy!
Angamba ny hany fomba amam-panao amin'ny marketing dia ny mampiavaka ny zavatra rehetra ataonao… amin'ny teny hafa, ialao ny raikipohy. Nanangana programa mailaka mivantana voamarina ara-statistika ho an'ny mpanjifa aho izay tokony hanome fiakarana avo roa heny amin'ny tahan'ny valiny. Marina ny angon-drakitra, tsy nisy hadisoana ny fizarazarana, ny kopia sy ny firafitra dia nifanaraka tamin'ny 'formulas' rehetra, ary nisy olo-malaza sasany aza nanipy ny fitaoman'izy ireo sy ny anarany / ny endrik'izy ireo teo amin'ny peratra - saingy nanapoaka baomba ny fanentanana .
Amin'ny fanarahana ny raikipohy dia tsy nisy na inona na inona nampiavaka ny fampielezan-kevitra tamin'ny fampielezan-kevitra an-jatony na an'arivony hafa izay nanaraka ireo lalàna ireo ihany. Ka - ny fampielezan-kevitra dia feno ny sisa amin'ireo fampielezankevitra raiki-tampisaka ireo, hatrany am-pako.
Ataovy izay tsy tokony hatao. Aza manao ny Do's
Fa maninona eto amin'izao tontolo izao no mamoaka hery toy izany amin'ny tranonkala ny bilaogy? Mihevitra ny olona sasany fa ny fandraisana anjara betsaka, ny habetsahan'ny atiny ary ny fahaizan'ilay bilaogera mitondra ny atiny. Azoko antoka fa manan-kery ireny ... saingy tsy izany rehetra izany.
Anisan'ny mahasarika bilaogy iray ny fomba tsy fanarahan'izy ireo ny fenitra fanaovan-gazety mahazatra. Ny bilaogera sasany dia mitsambikina ady amin'ny saka amin'ny fifaninanana. Bilaogy iray ao amin'ny fanaovana bilaogy vola momba ny fisakafoanana tsara. Indraindray aho te-hiresaka momba ny politika sy ny finoana (ary saika mahazo valinteny poizina foana).
Ny bilaogy dia manome ny atiny sy ny maha izy azy, zavatra tsy dia mifandray matetika raha resaka bilaogy ataon'ny orinasa no resahina.
Tadidinao ireo dokambarotra Snapple malaza tamin'ny taona lasa? Ny fampiasana an'i Wendy Kaufman, ilay Snapple Lady, dia nanosika ny fivarotana Snapple hatramin'ny 23 tapitrisa dolara isan-taona ka hatramin'ny 750 tapitrisa isan-taona tamin'ny 1995. Wendy dia namaly taratasy mpankafy tamin'i Snapple tamin'ny fotoanany, ary nihevitra ilay masoivoho fa ho tsara izany. fomba hampiroboroboana ny marika. Nahomby tokoa ireo dokambarotra!
Nandray ny toerany i Quaker, navotsotra i Wendy, ary nanao kaput daholo izy… manaraka ny raikipohy! Quaker dia nilavo lefona ary avelao handeha ny Snapple. Ankehitriny Wendy dia mpiara-miasa ao Wendy Wear - akanjo miampy hetsika ho an'ny vehivavy, nampiroboroboana tamin'ny alàlan'ny bilaogy mazava ho azy!
Miverina amin'ny hevitro - ampiasao ny tranonkala hanentanana ny tenanao sy hahitanao hevitra vaovao momba izay ataon'ny olona hivarotra ny vokatra. Aza manaraka ny raikipohy… andrana! Manaova formule anao manokana!
Apr 9, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Heveriko fa ny fehezan-teny farany - "Manaova ny maodely manokana!" - no lehibe indrindra. Amin'ny fiteny raharaham-barotra, antsoina hoe fomba fanao tsara indrindra izy io. Amin'ny ankapobeny, tadiavo izay mandeha, ahodino, ary avy eo raiso ho toy ny fomba fanao mahazatra. Izany no nataon'i Starbucks.
Noraisin'izy ireo ny lesona nataon'i Henry Ford momba ny famokarana betsaka, ary nampiasainy tamin'ny tanjon'izy ireo ("Afaka manana loko tadiavinao ianao, raha mbola tononkira eto an-tany"), izay nahatonga azy ireo hahomby tamin'ny fiheverana fa nilatsaka ny vola, afaka nanao fehezo ny zavatra niainan'ny mpanjifa, ary ataovy ireo zavatra izay nahomby tamin'ny asany fa tsy maminavina sy manandrana zavatra mety tsy hahomby.